paypal and visa cardit card — MYSTERY ZILLION
paypal and visa cardit card
paypal and visa cardit card လုပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်
paypal account လုပ်ရင် card card number တစ်ခါတည်းပေးတာလား
ဒါမှမဟုတ် visa card လုပ်ဖို့
အစ်ကို က မဟာရန်ကုန်မှာ နေတာလား။ အစ်ကိုက ဘဏ်အကောင့် ဖွင့်ချင်တာလား။
visa account လုပ်ချင်လို့့ပါ
အစ်ကို က visa credit card လုပ်ချင်တာဆိုရင်....မဟာရန်ကုန်ကနေလုပ်လို့မရဘူး။ အစ်ကိုအနည်းဆုံး စင်္ကာပူလောက်သွားပြီးရင် ဟိုက ဘဏ်တစ်ခုခုမှာ saving or current account ကိုဖွင့် ပြီးရင် အစ်ကို က visa card လိုချင်ရင် သူတို့ဆီမှာ ထပ်လျှောက်သူတို့ က အစ်ကို ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲ ကြည့်မယ်။ ပြီးရင်...ပေးသင့်မပေးသင့်ဆုံးဖြတ်မယ်။
ပေးသင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင် ....အစ်ကိုရမှာ ပါ။ ကျွန်တော်လည်း S'pore က
OCBC Bank account လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထုံးစံအတိုင်းဘဲ။ ဒါပေမယ့်...အစ်ကို အဲဒီ စင်္ကာပူဘဏ်က တစ်ခုကောင်းတာက.....အွန်းလိုင်းကနေ အစ်ကိုရဲ့ပိုက်ဆံကို transfer လုပ်လို့ရတယ်။ အစ်ကို မဟာရန်ကုန်ရောက်ရင်လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ စင်္ကာပူဆီသွားစရာမလို...:68:
ဘယ်နေရာမဆို အင်တာနက်ရှိရင် အစ်ကို အကောင့်ကို ဖွင့်လို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျန်သေးလည်း.... history, online bank account, transfer အကုန်လုံး အွန်းလိုင်းကနေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
paypal အကောင့်လုပ်ပေးဆိုရင်တော့ လုပ်ပေးလို့ရတယ်.. ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံး singapore နဲ့တော့ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမှာပါ..ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.. paypal အကောင့်သုံးလို့ရတဲ့နေရာမှာ မြန်မာမပါဘူးထင်တယ်.. ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာဘဲရှိရှိ.. အကောင့်တစ်ခုရှိထားတာတော့ကောင်းတာပေါ့..
ကျွန်တော် pm ပို့ထားပေးပါမယ်.. ဒီနေ့(သို့)မနက်ဖြန်လောက်ပေါ့.. ဘယ်နာမည်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတာပြောပါ..
အစ်ကိုရေ...ကျွန်တော်ကို paypal နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါ။ အစ်ကိုအားရင်ပေါ့...။
ကျွန်တော် အဲဒီအပိုင်းကို သိပ်နားမလည်းဘူး။ နောက်ပြီး အဲဒီ အကောင့်ရှိရင်ကောငဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ။ Bros and Cons !နောက်ပြီး ကျွန်တော် ကိုကောလုပ်ပေးလို့ရမလား။:39::P
Paypal က online shopping အတွက်ကြားခံပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှူ.ပါ။ အဲဒီဝန်ဆောင်မှူ.အပေါ်မှာ ပိုက်ပိုက် ယူတာပါ။ Paypal က မြန်မာပြည်အတွက် service မပေးပါဘူး US-Policy နဲ.ညိနေတာက တကြောင်း မြန်မာပြည်မှာ international online banking system မရှိတာကြောင်.လဲမရတာပါ။ Credit Card ကတော.လုပ်ရတာ မ လွယ်ပါဘူး ကိုလုပ်မည်. bank က member တယောက်ရဲ.အာမခံချက်နဲ. အလုပ်က ရတဲ. လစာ ကိုပူးတွဲတင် ပြ မှရတာပါ။ ဒါတောင် bank တွေက လစာ သတ်မှတ်ချက်ရှိ ပါတယ် basic salary ဘယ်လောက် ရမှ ဘယ် amount ထိဘဲ သုံးလို.ရမယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ ကျောင်းသားတွေကတော. Debit card လုပ် လို.ရပါတယ် အပေါ် လိုအပ်ချက်တွေထဲက လစာသတ်မှတ်ချက်တော.မပါတော.ဘူးပေါ.။ ဒါပေမဲ. Credit card နဲ. Debit card ကကွာပါတယ်။Credit card ကကို.account မှာပိုက်ဆံမရှိလဲ card ရဲ.သတ်မှတ်ထားတဲ.money amount ကိုသုံးလို.ရပါတယ် လကုန် ရင်တော.ကိုဘာသုံးထားလဲဆိုတာ bank ကနေငွေစရင်း ရှင်းတမ်းပို.တဲ.အခါအကြွေးဆပ်ရပါတယ်။Debit card ကတော. ကို.account မှာ ပိုက်ပိုက် ရှိမှကို သုံးလို.ရတာပါ။paypal က Debit ကော Credit ကဒ်နှစ်ခုလုံးလက်ခံပါတယ်။paypal က account ဖွင်.ပြီးတာနဲ.ကို.card ကိုလင်.လုပ်ပေးရပါတယ် ဒါပေမဲ.ချက်ချင်းသုံးလို.မရသေးပါဘူး။paypal ကို.ကဒ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ ကို.bank account ထဲကို 4digits activation code ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါရတော.မှ paypal account မှာထည်.ပြီး activated လုပ်တော.မှသုံးလို.ရမှာပါ။နောက်တခုက paypal account ဖွင်.ထားတဲ.တိုင်းပြည်ကဘဲ paypal ကိုသုံးလို.ရပါတယ်။:D
ပို့စရာရှိတာ တွေတော့ .. PM ကနေ .. အားလုံးပို့ပြီးထားပြီးပါပြီ.. ရှင်းပြစရာတွေကတော့ အောက်က link တွေမှာသွားကြည့်ပေးပါ.. အရမ်းအသေးစိတ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်မသိဘူး.. လိုအပ်တဲ့အချက်တော်တော်များများတော့ အဲဒီအထဲတွေမှာ ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..
.. paypal accoung မှာ ပိုက်ဆံ free နည်းလမ်းနဲ့ရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာ ပြောပြထားပါတယ်.. အဲဒါတွေဖတ်ပြီးသွားရင် တော်တော်များများသိသွားပါလိမ့်မယ်.. အဆင်ပြေပါစေ..:)
ကျွန်တော် paypal ဆောက်ပြီး
သိချင်တာက paypal account လျျှောက်ပြီဆိုတာနဲ့ card number and given name မပါဘူးဗျ
Personal accounts, Premier accounts, Business accounts ဆိုပြီး ၃မျိုးရှိတယ်။ Personal accounts နဲ့ Premier accounts အတွက် credit card နဲ့ link လုပ်ဖို့ မလိုဘူး။ ပိုက်ဆံကို cardရှိတဲ့သူဆီက request လုပ်ပီး ထည့်ခိုင်းလို့ရတယ်။
card နဲ့ မချိတ်ဘဲ unverified paypal သုံးလို့ရပါတယ်။ အသွင်းအထုတ်တော့ အကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့ .... တစ်လကို အသွင်း ဒေါ်လာ ၅၀၀ နဲ့ အထုတ် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပါ။
paypal ဝင်ငွေရအောင်ကတော့ ဒီ ကိုသွားပါ ...
ဒါဆို site တစ်ခုခုကနေ ငွေလွဲမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်ကိုလက်ခံခိုင်းတာက paypal မှာပဲ့ credit card name
အကယ်ရှ် လွဲလိုက်တဲ့ငွေကို paypal ထဲတစ်ခါတည်းတည်းရောက်လာတာလား
site တစ်ခုခုကနေ ငွေလွှဲလိုက်မယ်ဆိုရင် paypal အကောင့်ထဲကို အဲဒီငွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Paypal အကောင့်ကအဲဒီငွေကို ထုတ်ချင်ရင် paypal က ကိုယ်ဖြည့်ထားတဲ့ ဘဏ်ရဲ့ debit card or credit card အကောင့်ထဲကို ပိုက်ဆံလွှဲပေးလိုက်မှ ကိုယ်ကအဲဒီဘဏ်ကနေ သွားထုတ်ယူရမှာပါ။
Paypal ကတစ်ဆင့်ခံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ သဘောပါ။